Minisitra Lalatiana Andriantongarivo; « Mirindra ny fifandraisan’ny fanjakana sy ny katolika » - ewa.mg
News - Minisitra Lalatiana Andriantongarivo; « Mirindra ny fifandraisan’ny fanjakana sy ny katolika »
Niainga avy any Fianarantsoa ny
fandaharana « Tsy ho tompon-trano
mihono », omaly, noho ny nanatrehan’ny minisitra, i
Lalatiana Andriantongarivo hetsika tany an-toerana. Nitondrany
fanazavana tamin’izany ny momba ny fikasan’ny sasany hamono ny
filoha. Anisan’izany ny nihainoana ny Mgr Razanakolona Odon noho ny
fanononan’ilay Malagasy Frantsay ny anarany tamin’ny famotorana
natao. « Mba hivoahan’ny marina ny fakana am-bavany azy na
marina na tsia satria voatonona hatrany ity mpitondra fivavahana
ity. Nivoy foana io voarohirohy io fa atolotry ny katolika sady
tohanan’ny fiangonana ho praiminisitra » hoy izy.
Nohitsin’ny kardinaly Tsarahazana anefa, araka ny nambaran’ny
minisitra fa tsy manohana olona ny fiangonana ka tsy manana olana
amin’ny katolika sy tsy miady amin’ny mpitondra fivavahana ny
fanjakana. « Mirindra tsara ny fifandraisan’ny roa
tonta », hoy ihany izy.
Nanteriny koa fa tsy mbola misy fitsarana fa vao fisamborana no
misy nefa ambaran’ny sasany fa sarimihetsika. Nohitsiny fa
tsy mandinika intsony ny sasany ka zary manao hitsin-dalana
fotsiny. « Tsy mamorona isika fa efa niaiky ny sasany
amin’izy ireo. Tsy anaty soatoavina sy kolontsaintsika izany. Ny
tsy fitovian-kevitra misy foana ary lalan’ny demokrasia izany,
saingy tsy tokony ho tonga amin’ny fifofoana aina kosa», hoy
L’article Minisitra Lalatiana Andriantongarivo; « Mirindra ny fifandraisan’ny fanjakana sy ny katolika » a été récupéré chez Newsmada.
Kiaka et Jeneraly au Karibotel Les deux vétérans de la musique urbaine, le premier pionnier du rock et le second pionnier de la chanson à texte, sont à voir cet après-midi au Karibotel du Domaine Manerinerina Ambohibao Ambohijanahary. Kiaka et Jeneraly se partageront la scène pour un showcase accessible sur réservation. Pour cet événement, l’entrée est gratuite pour un groupe de 10 personnes. Le reggae de Rootsikalo aux 67ha Sud La journée internationale du reggae s’annonce prolifique pour Roostikalo. Ce jour, le chanteur de reggae est à l’affiche d’un showcase au Kick Back Karaoké aux 67ha Sud, après avoir assuré hier soir avec Sitraka au Club 3 Anosizato. Il y interprétera ses compositions pour un public restreint étant donné les restrictions sanitaires actuelles. No Comment présente Tambours Gasy Après l’annulation in extremis de l’événement LGBT dans ses locaux, le No Comment Bar a modifié sa programmation de ce soir, et met ainsi à l’affiche Tambours Gasy. La formation de percussionnistes formée dans les années 2000 trouve ici l’occasion de mettre au premier plan les percussions pour le plus grand plaisir des adeptes des rythmes et de la musique malgache. Du rock avec The Revery au Madagascar Underground Comme annoncé dans nos colonnes, le jeune trio The Revery joue ce jour au Madagascar Underground Antsahavola. Pour ceux et celles intéressés par ce groupe de rock alternatif, le concert est prévu débuter à 14h. Agrad & Skaiz à Antsirabe Chacun des deux rappeurs avait fait son petit bout de chemin ces derniers temps. Ce jour, pour le plus grand plaisir de ses fans, le groupe se reforme pour un show 100 % rap au AK’ETO BIRA, à Antsirabe. Ce concert exceptionnel débutera à 20h. Lianah et Jean Aimé à Amparafaravola Pour ceux qui sont du côté d’Alaotra, deux grosses pointures de la musique tropicale, Lianah et Jean Aimé offrent un concert au Terrain d’Amparafaravola ce dimanche 04 juillet 2021, à partir de 14h. Un grand événement pour cette partie du pays où les événements culturels étaient quasi inexistants ces derniers mois. Recueillis par Maminirina Rado / Zo / Anja L’article Guide du week-end est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Guide du week-end a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fanazaran-tena: Efa manomboka miverina tsikelikely amin’ny fanazaran-tena ireo atleta eto amintsika, taorian’ny fanambarana nataon’ny filoha Rajoelina Andry, ny alahady teo. Efa miomana ihany koa amin’ny mety hiatrehana ny fifaninanana ho avy. Omaly, teny Ankorondrano, nisy ny niverina tamin’ny kotrana, saingy anatin’ny fanajana ny fepetra hatrany ny fanatanterahana izany. Efa miverina mikotra anaty efitrano ihany koa amin’izao ireo atleta toy ny eo anivon’ny taranja kick boxing sy ny ady totohondry.FMHMC: Mety hatao amin’ny novambra ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny FMHMC (Fédération Malagasy D’haltérophilie de Musculation et Culturisme), raha ny nambaran’ny mpitantana anivon’ity federasiona ity. Miankina tanteraka amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahasalamana anefa ny mety hahatanterahan’izany na tsia. Nohamafisin’ny mpitantana fa manaja ny fanapahan-kevitry ny fanjakana izy ireo ary vonona hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra takina. Nangonon’i Mi.RazL’article Sombintsombim-baovao a été récupéré chez Newsmada.
Fitaterana an-dRenivohitra: hitombo ny isan’ny « Bus Class » ary hiitatra amin’ny zotra hafa
Nanomboka niasa ny fiara mpitatitra manokana “Bus Class”, ny alatsinainy 2 aogositra teo.Nambaran-dRasolomanana David, mpikambana ao anatin’ny Fikambanana Milamina Antananarivo (FMA), fa miisa enina ireo efa am-perinasa amin’izao fotoana izao, miasa amin’ny zotra 015 sy ny 192. Etsy an-kilany, nilaza ny tale jeneralin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT), ny jeneraly Reribake Jeannot, fa mbola misy tsy tomombana ara-teknika ireo roa, izay no antony tsy nahafahany niasa, efa mijery izany ny tompon’ny fiara. Mampiavaka ny Bus Class, ny saran-dalana 1.500 Ar, seza telo isaky ny andalana, ary misy tambajotra wifi, ahazoana manao internet.Misy dimy hafaNanamafy Rasolomanana David fa fanombohana ihany izao voalohany izao fa hitombo tsikelikely ny isan’ny fiara sady hiitatra any amin’ny zotra hafa ihany koa. Efa misy fiara dimy hafa, vonona ho an’ny zotra 192. Miezaka manao araka izay vitany ny tompon’ny fiara, saingy lafobe ny mason-karena amin’ny fanovana ireo fiara. Manodidina ny 4 hatramin’ny 8 tapitrisa Ar ny vola ampiasaina. “Mampiasa vola samirery ny tompon’ny fiara fa tsy mbola nampindrana ny banky aloha hatreto. Hita fa ahazoana tombony ihany anefa ity fomba fitaterana manokana ity”, hoy ihany izy.Marihina fa paikady vaovao, iarahan’ny mpitatitra sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny fananganana ny “Bus Class”, hanamaivana ny fitohanan’ny fifamoivoizana sady hanatsarana ny tolotra amin’ny fitateram-bahoaka. Tsy midika izany fa hampihena tolotra ny ny taxi-be mahazatra, satria misy ny bokin’andraikitra mifehy azy ireny, tsy maintsy arahina, ary iharan’ny sazy raha mandika izany.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fitaterana an-dRenivohitra: hitombo ny isan’ny « Bus Class » ary hiitatra amin’ny zotra hafa a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Atsimo Andrefana: tombanana latsaka 5000 t sisa ny vokatra tongolo
Fihariana iray be mpanao ny voly tongolo any amin’ny faritra Sofia sy Atsimo Andrefana. Mitovy amin’ny karazam-boly maro, sahirana ny mpaboly, mihena ny vokatra. Noho ny fiovan’ny toetr’andro sy ny toe-tany ny mahatonga izany, hoy ireo mpamboly.Samy mpamokatra tongolo daholo ny any Atsimo Andrefana, Menabe, sy Sofia. Nisy fanadihadiana tany amin’ireo toerana roa ireo : nojerena tany Mampikony ireo karazana tongolo volena ary tany atsimo, momba ny varotra sy ny vokatra misy. Ny hanatsarana ny vokatra no tanjona, hanampiana ireo mpamboly amin’ny fihariana ataony. Nojerena ny lafiny rehetra hampahomby izany.Ny faritra Sofia sy Atsimo Andrefana no mpamokatra tongolo betsaka, saingy nihena ny vokatra tato anatin’ny dimy taona farany. Tamin’ny 2016, namokatra 7000 t ny any Atsimo Andrefana fotsiny, mitovitovy amin’izay ny any Sofia. Nanondrana teo amin’ny 3000 t isika. Amin’izao fotoana, noho ny fiovan’ny toetr’andro, tombanana latsaka 5000 t sisa, raha be indrindra, ny faritra Atsimo Andrefana.Nofantarina miaraka ny hevitry ny mpamboly, ary navela izy ireo niteny malalaka momba ny tantarany sy ny fianakaviany, ny fivoarany tamin’ity fihariana ity na teo aza ireo olana samihafa, ny fifandraisany amin’ny mpajifa na mpanangom-bokatra. Naharitra 45 andro ny fanadihadiana nataon’ireo mpikaroka amin’ny mpamboly sy ny mpivarotra. Raha ny fantatra avy amin’ireo olona ireo, efa tany amin’ny taonjato faha-XV niditra teto Madagasikara ny tongolo noentin’ireo Arabo, nitombo araka izay koa ny karazana niditra avy any amin’ny tany tatsinanana.Tsy niditra ny fanjakana hatramin’izayTamin’ny taonjato faha-XIX no tena nahazo vahana teto ny voly tongolo tany amin’ny tapany andrefana. Nanomboka tamin’izay, nivoatra niaraka tamin’ny legioma io karazam-boly io nampiasan’olona vola betsaka mitovy amin’ny tsaramaso, kabaro, na landihazo sy paraky, izay samy hita tany amin’ny faritra andrefana. Nampidi-bola hatramin’izay ka hatramin’izao, saingy tsy ampy tosika. Tsy niditra tamin’ity fihariana ity mihitsy ny fanjakana hatramin’izay. R.MathieuVokatra amin’ny fotoana rehetraMaintanyMampikony : jona –septambraMangambe (Maevatanana) : kely ny vokatra, jolay-aogositraAnkazoabo-Mananovy: jolay-oktobraSoamanonga-Fotadrevo : jolay-oktobra, tsara ny vokatraTanandava : kely ny vokatraAmbatondrazaka : manomboka avrilyBetafo : kely ny vokatra, novambra – desambra FahavaratraBealanana : tsara ny vokatra, janoary-desambra, mamatsy ny Nosy manodidinaAmbatomanoina, Ambohidratrimo, Anjozorobe : kely ny vokatraTalatavolonondry : novambra-febroary, mamatsy ny Nosy manodidinaL’article Faritra Atsimo Andrefana: tombanana latsaka 5000 t sisa ny vokatra tongolo a été récupéré chez Newsmada.
Mila malina sy marina…
Ao anatin’izao fanomanana ny fitsenana ny taona vaovao 2021 izao, mandeha be ny tsaho etsy sy eroa. Mety hiditra amin’ny andiany faharoa amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, hono, i Madagasikara; ho mafimafy no ho ny voalohany, hono, ny faharoa… Toy ny manampy trotraka amin’ny fanelezana tsaho ny tena amin’ny filazana izany. Nefa aleo vakina bantsilana ny marina mba tsy handaitra. Tsy mandeha ho azy amin’izao tsinona ny tsaho na ny filazana tsy marina fa misy milaza sy manely toy izay natao izay. Haninona? Hanakorontana fotsiny izao ny sasany fa tsy inona, te hamendrofendro sy hampitahotra olona, te hanaratsy endrika ny fitondrana fa tsy mahomby amin’izay lazainy sy ataony… Amin’izany rehetra izany, mila fahamalinana ny tena mba tsy andairan’ny tsaho, tsy hanely izany. Fahamailoana ilaina koa ny fitandremana amin’ny fiarovan-tena amin’ny valanaretina Covid-19. Eo ny fanaovana arotava, ny fanasan-tanana matetika, ny fanajana ny elanelana iray metatra… Eny, na efa tsy firy aza ny tena mbola mitana sy mampihatra izany amin’izao. Tsy izay atao sy lazain’ny hafa no inona sy inoana fa ny tena miatrika na mety ho tratran’ny tsimokaretina… tsy hita maso sy mamono. Izay tsy fiheverana loatra intsony ny fepetra fiarovan-tena izay no anisan’ny mahatonga ny sasany mamorona sy manely tsaho? Mampandaitra na izany ho azy koa… Na omen’ny olona lanja ho azy izany ka lasa adihevitra etsy sy eroa. Aleo malina sy marina: malina amin’ny fiarovan-tena hisorohana ny mety ho fifindran’ny aretina, marina amin’izay lazaina sy atao fa tsy anisan’izay andairana na mpanely tsaho. Ao anatin’izao fanomanana ny fitsenana ny taona vaovao izao, be ny karazana fifamezivezena sy fifaneraserana. Mora ielezana sy andairan’ny tsaho? Aleo malina sy marina. Tsy hakanosana ny fahamalinana amin’ny fiarovan-tena amin’ny aretina, tsy hadalana ny tsy fihainoana sy tsy finoana io karazan-dresaka rehetra io… tsahoina hoe vaovao. Tsy kely lalana ny ratsy? Tsy aiza tsy aiza fa eny ihany.Rafaly Nd.L’article Mila malina sy marina… a été récupéré chez Newsmada.
Fivorian’ny G7: Amerikanina sy Britanika hifanehatra amin’ny Sinoa
Mandritra ny fivorian’ny G7, ireo firenena matanjaka indrindra, any Biarritz, Frantsa, niombon-kevitra ny filoha amerikanina, Donald Trump sy ny Praiminisitra britanika, Boris Johnson, momba ny raharaham-barotra. Fihaonana voalohany teo amin’izy roa lahy, omaly, hatramin’ny naha Praiminisitra an’i Boris Johnson, izay hitan’ny filoha amerikanina fa « amin’ny tena ilàna azy », indrindra amin’ny fivoahan-dry zareo Britanika ao amin’ny Vondrona eoropeanina (Brexit). Nilaza ny hisian’ny fifanarahana ara-barotra lehibe eo amin’ny firenena roa tonta i Donald Trump, hiatrehana an’i Sina. Nanamafy izay politika fiaraha-miasa izay i Boris Johnson, naneho ny fahavononany hifanehatra amin’ny Sinoa ihany koa.Io fifanarahan’ny Britanika io no mameno ny banga amin’ny fialany ao amin’ny Vondrona eoropeanina. “Izy no hitako mahavita io asa io, izay tsy namparisika ny Praiminisitra teo alohany, Theresa May”, hoy hatrany ny filoha Donald Trump. Ady atrehana ary tsy maintsy atrehan’i Etazonia sy Britanika izany izao ny mifaninanana ara-barotra amin’i Sina, na somary tsy mitovy hevitra amin’izany aza ny filoha frantsay, Emmanuel Macron. Amin-dry zareo Amerikanina sy Britanika, zava-doza ny ataon’ny Sinoa eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Saika voagejan’ny Sinoa avokoa izao ny tsena iraisam-pirenena, hatrany Eoropa, ka sahirana ny Amerikanina.Ankoatra ny raharahan’ny Amerikanina sy ny Britanika, anisan’ny ivorian’ireo matanjaka hatramin’ny anio, ny doro ala any Amazonia, fa eo indrindra koa ny raharaha nokleary manoloana an’Iraka. Tonga tampoka any Biarritz ny minisitry ny Raharaham-bahiny iranianina, i Javad Zarif. Efa nampiomana ny namany ny amin’ny mety fahatongavan’io minisitra iranianina io ny filoha Emmanuel Macron. Ny Iraniana koa, toa an’ny Sinoa, tsy matahotra an’ireo G7 ireo. I Rosia moa nesorina tsy mpikambana, ka lasa G7 ny G8, saingy tsy nampihetsi-bolomaso an’i Vladimir Poutine izany. R.MathieuL’article Fivorian’ny G7: Amerikanina sy Britanika hifanehatra amin’ny Sinoa a été récupéré chez Newsmada.
« Pentecôte Rock »: hanolotra seho miavaka ry Green, Iraimbilanja, Tselatra
Tsy vitsy ary azo isafidianana tsara ireo hetsika fialam-boly amin’ny Alatsinain’ny Pentekosta izao, eny amin’ireo toerana efa mahazatra ny maro. Hampiavaka ny amin’ity taona ity kosa ny fanomezan’ny mpikarakara, ny Best Pro, tombony ireo mpankafy mozika rock. Nampisalorana ny anarana « Pentecôte Rock » ny fampisehoana, izay hotanterahina etsy Antsahamanitra.Tsy vao sambany eo amin’ny fanandratana ity mozika mafana ity ny mpikarakara, izay efa nanolotra ny « Tana in Rock », tamin’ny taon-dasa. Na izany aza, hanana ny mampiavaka azy ny « Pentecôte Rock », satria tsy hifandimby hiaka-tsehatra fotsiny ireo tarika nasaina fa hampiaina tantara, amin’ny alalan’ireo hirany tsirairay avy, izay heverina fa hiraikitra ao am-pon’ny mpankafy.Tsy iza moa ireo tarika ireo fa ry Iraimbilanja, Green ary Tselatra, samy sangany eo amin’ny rock malagasy. Araka ny fanazavana, hifandimby hanolotra hira dimy avy ny tarika ary toy izany hatrany. Hanamafy ny fampiainana ny tantara an-kira ny jiro maroloko sy ny hazavana isan-karazany.Landy R. L’article « Pentecôte Rock »: hanolotra seho miavaka ry Green, Iraimbilanja, Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Meteo malagasy: efa nandatsaka orana artifisialy
Efa nisy ny hetsika fandatsahana orana artifisialy vitsivitsy natao tamin’ity vanim-potoana ririnina ity, izay natao ny volana aogositra sy tamin’ity septambra ity, raha ny fanazavan’ny Meteo malagasy. Nahazoana vokatra tsara izany satria afaka nanampy ny rotsak’orana teny Andekaleka sy Tsiazompaniry ary Mantasoa. Ny Jirama no nanao ny fangatahana tamin’ny fandatsahan’orana mba hahafahan’ny milina mamokatra herinaratra mihodina. Nanazava ny Meteo malagasy fa misy karazany roa ireo singa hampiasaina amin’ny fandatsahan’orana raha eto Madagasikara ary mifanaraka amin’ny vanim-potoana. Mampiasa sira rehefa vanim-potoana mafana na fahavaratra. Rano kosa no ampiasaina rehefa vanim-potoana mangatsiaka na ririnina.Tsy amin’ny fotoana rehetra anefa no azo hanaovana ny fandatsahan’orana, miankina amina fepetra maro mba hahazoana vokatra tsara. Anisan’ny tsy maintsy ao anatin’izany ny fisian’ny rahona betsaka eny amin’ny habakabaka “nuage Cumuluforme” amin’ny vanim-potoana mafana ary “nuage stratiforme” amin’ny vanim-potoana mangatsiaka.Miara-miasa akaiky amin’ny sehatra isan-karazany ny Météo Madagascar rehefa misy ny tsy fahampian’ny rotsakorana. Mateti-pitranga ny tsy fahampian-drano, ritra ny renirano, makina ny voly, tsy ampy ny famatsian-drano ary mikorontana ny herinaratra, tsy mahazo aina ny zava-manan’aina. Anisan’ny vahaolana amin’izany ny fanaovana fandatsahana orana. Nanamarina ny Meteo fa tamin’ity taona 2021 ity indray vao nanandrana nampiasa ny fandatsahan’orana amin’ny alalan’ny rano izy ireo. Efa tany amin’ny 20 taona lasa tany no nampiasa io rano io farany. Ny fampiasana ny sira kosa dia efa fanao isan-taona.Tatiana A L’article Meteo malagasy: efa nandatsaka orana artifisialy a été récupéré chez Newsmada.
Mitahiry ny fahaveloman’ny teny ny literatiora
Tsy velona ho an’ny tenany ny literatiora fa velona ho an’ny manodidina azy … Toy ny zava-mananaina rehetra izy ka mety mitombo, mivoatra, mivelatra… Mamoa zava-baovao entin’ny fotoana ary mety ho azon’aretina mihitsy aza ny zavakanto, raha mijery ireo karazana literatiora malagasy fahiny, izay tsy dia nisy mpanao intsony, ankehitriny, raha ny karazan-dahabolana no horesahina, ohatra amin’izany, ny hainteny sy ny fankahatra ary ny maro hafa navalon’ny fotoana, ankavitsiana sisa no mba mamelo-maso ireny amin’izao fotoana izao. Ny tena marina aza dia tsy iainana intsony, toy ny taloha, fa eny an-tsehatra rehefa misy lanonana, toy ny aingam-pahatsiarovana sy fotoana ara-tandindona sisa ny famohafohazana azy. Etsy an-kilany, mihazakazaka mankany amin’ny literatiora an-tsoratra, indrindra ny fanoratana tononkalo ny tanora, vokatry ny tambajotran-tserasera, izay tena mahazo vahana ankehitriny, ary eo no tena ilana fitandremana mafy satria saropady ny literatiora, indrindra, antoka mitahiry ny fahaveloman’ny teny, ny hasoany, ny hasiny, fiandrianany… Iainantsika andavanandro ny teny, iainan-tsy tsapa anefa indraindray, zary mandeha ho azy eny fotsiny toa entim-pahazarana. Manala antsika ao anaty toetra mahabiby ny literatiora ary mikitika ny laingom-panahy maha olona amin’ny tena fisandratana tanteraka : ara-tsaina, ara-batana, indrindra ny ara-panahy. Ny firenena mandroso ankehitriny dia izay nifototra sy nitrandraka ny kolontsaina sy ny literatiora ao aminy ary manome vahana ny teniny ho ampinga enti-mitrandraka ny haren’ny taniny. Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fahaveloman’ny teny ny literatiora ary lalandra maha firenena ny firenena iray mihitsy.NarilalaL’article Mitahiry ny fahaveloman’ny teny ny literatiora a été récupéré chez Newsmada.
Mangamiraratsy-Beromanga: voatafiky ny dahalo ny ben’ny Tanànan’i Berevo
Lasibatry ny fanafihan-dahalo teo amin’ny fokontany Mangamiraratsy, kaominina Beromanga ny ben’ny Tanànan’i Berevo, afakomaly antoandro tokony ho tamin’ny 12 ora. Voatifitra teo amin’ny lamosiny izy, saingy tsy ahina ny fahasalamany. Raha ny fanadihadiana, niainga avy any Maintirano hamonjy fodiana any Berevo ny moto miisa telo, nifanao aloha sy aoriana. Voasakana anefa ilay moto nitari-dalana ka voaroba ny vola ary noratrain’ireo olon-dratsy ny mpitondra azy. Vao nahita izany anefa ireo nanao taingin-droa tamin’ilay moto faharoa, izay nisy an’ilay ben’ny Tanàna dia niverin-dalana avy hatrany. Teny an-dalana anefa, tojo tsy fahatomombanana ny moto ka nanararaotra nitifitra io olom-boafidy io ireo dahalo ka voa teo amin’ny lamosiny izy, ireo nahavanon-doza kosa nitsoaka avy hatrany. Taorian’ny tranga, nalefa vonjimaika eny amin’ny hopitalin’ny Maintirano ilay voatifitra ary tsy atahorana ny ainy.Henintsoa HaniL’article Mangamiraratsy-Beromanga: voatafiky ny dahalo ny ben’ny Tanànan’i Berevo a été récupéré chez Newsmada.
Fiatrehana ny Covid-19: iharan-javatra maro ny haino vaky jery
Tampoka ho an’izao tontolo izao ny firongatry ny valanaretina Covid-19. Na ny firenena matanjaka, indrindra fa ny tany mahantra, nivarahontsana nanomboka teo amin’ny voalohan’ny taona 2020, raha nisantatra izany ny faramparan’ny taona 2019 i Chine. Sehatrasa nizaka ny mafy ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety haino vaky jery. Noho io tampoka io, tsy nanan-javatra hatolotra loatra ny mpampita vaovao. Na, nanana ny holazaina ihany, saingy, mety tsy ho feno, na mety ho diso aza. Na eo aza ireo, tsy nihemotra fa niroso hatrany ny fampitam-baovao haino vaky hery maneran-tany. Sady niezaka nandray ireo fahalalana momba ny Covid-19 ny mpanao gazety, no niezaka nampita sy nizara ny zavatra fantany. Sady miezaka ny matanja-tsaina no mankahery ireo sendra azy. Nanao fikarohana momba ny fanafody hitsaboana, na ny vaksiny hisorohana ny Covid-19 ny isam-pirenena. Nampahafantatra izany ny mpanao gazety, na ho inona na ho inona ny andraisan’ny olona azy.… Mba ahazoan’ny mpanao gazety manome vaovao marim-pototra momba ity valanaretina ity, ilaina hatrany ny fanatevenam-pahalalana satria tsy mitsaha-mivoatra ny Covid-19 maneran-tany.HaRy RazafindrakotoL’article Fiatrehana ny Covid-19: iharan-javatra maro ny haino vaky jery a été récupéré chez Newsmada.
“Hoporofoiko aminao”: niara-dalana ny antsan-tononkalo sy ny soradihy…
Afa-po ny rehetra, feno ny efitrano… Mitohy hatrany ny seho an-tsehatra ataon’ireo mpiangaly ny literatiora malagasy. Poeta efatra samy manana ny maha izy azy amin’ny haisoratra ankehitriny indray no naneho ny “Hoporofoiko aminao” tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena efitrano Dox,ny faran’ny herinandro teo, nanomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Izany dia nahitana an-dry Namby Mivetso, Tsiresy kely, Ilo Sederamanana, ary i Dimbin’ny Nofy. Seho miavaka tsy toy ny mahazatra no nentin’izy ireo tamin’io fotoana io, satria dia nisy antsan-tononkalo, soradihy, teatra. Mampiroborobo ny haisoratra ny fitaovan-tserasera, indrindra ny “facebook”. Mampifanatona kokoa, mifankahalala, mifampizara ary matetika tonga eny an-tsehatra izany rehefa ao ilay finiavana te haneho ny maha izy azy any amin’ny tsirairay, anisan’izany ny haisoratra, indrindra ny tononkalo.NarilalaL’article “Hoporofoiko aminao”: niara-dalana ny antsan-tononkalo sy ny soradihy… a été récupéré chez Newsmada.